Mkpụrụ ugu: Mara uru ya niile yana otu esi eri ya!
Zucchini Lasagna: Chọpụta usoro kachasị mma iji mee obi ụtọ a!
Alimentos	 15 January 2019
A ugu mkpụrụ ghọrọ onye ama ama na mba ahụ niile n'ihi uru ya maka ahụike, ọdịmma yana kwa maka ọdịmma ndị mmadụ. Ugbu a, ọtụtụ ndị nyocha na -amụ ya bụ ndị na -achọ mkpụrụ a ihe ngwọta maka ọtụtụ nsogbu.
N'isiokwu ndị a, ị ga -amata ihe niile achọpụtala gbasara mkpụrụ ugu, ezigbo uru ya, otu esi eri ya na ozi ndị ọzọ dị mkpa gbasara ihe a. Lelee!
Mkpụrụ ugu, nke a tụfuru na mbụ mgbe a na-akwadebe efere ya na akwụkwọ nri, ghọrọ ihe a na-ejikarị eme ihe, n'ihi akụrụngwa ọgwụ yana maka ọdịmma.
Ndị dọkịta na ndị nyocha achọpụtala n'ime mkpụrụ ahụ nnukwu isi iyi protein, nke dị mma maka ijikọ akwara ike, na -eme ka akụkụ ahụ sie ike, na ọbụna na -agbada.
Mkpụrụ ugu nwekwara ọgaranya na magnesium, nnu nnu dị ukwuu maka ịhazi ọkwa shuga, ọbara mgbali na inye mkpụrụ ndụ ike.
Uru ndị ọzọ achọpụtala ugbu a bụ na mkpụrụ ugu na -echebe sistemu na -alụso ọrịa ọgụ, na -enyere ahụike prostate aka n'ime ụmụ nwoke, na -eme ka ọnọdụ dị mma, na -enyere aka ihi ụra nke ọma, ma jupụta na antioxidants na -asacha ahụ gị ma mee ka imeju gị na -arụ ọrụ nke ọma.
Marakwa uru niile ose ji kwa!
ugu mkpụrụ mmanụ
Nke kacha mma na nke a na -ahụkarị bụ iri mkpụrụ n'onwe ha, ewepụtara na ugu ma tinye ya na salad ma ọ bụ efere ọzọ, mana enwerekwa mkpụrụ mkpụrụ ugu, nke enwere ike iji ya na nri ma ọ bụ gbasaa na akpụkpọ ahụ na ntutu.
A na -emekarị mmanụ ahụ site na ugu pụrụ iche a na -akpọ Styria ma nweekwa otu uru dị ka mkpụrụ akụ ị zụtara mgbe ịzụrụ ugu n'ahịa ma ọ bụ nnukwu ụlọ ahịa.
Ọ bụrụ na ịchọrọ iji mkpụrụ ugu, isi ihe bụ iji ha mee nke ọma, na -enweghị fries, anụ, nri, ma ọ bụ ihe yiri ya. Nke a bụ n'ihi na njirimara mkpụrụ ahụ na -aka mma ma ọ bụrụ na ọ dị ndụ. Ikpocha mkpụrụ osisi ahụ nwere ike ime ka ọ hapụ ụfọdụ n'ime nri ndị a.
Yabụ, nke a na -ahụkarị bụ ikewapụ mkpụrụ osisi wee soro ha kwadebe salad oyi. Salad a nwere ike ịbụ ebe okpomọkụ, mara mma, nwere akwụkwọ, akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi wee gụchaa mkpụrụ ugu.
Ndụmọdụ ọzọ bụ ịzọpịa mkpụrụ osisi ahụ ma tinye ha na nri na efere dị njikere, dị ka anụ, osikapa, ma ọ bụ n'ime ofe na-atọkwa ụtọ nke ukwuu.
Ị nwere ike iri mkpụrụ ugu n'ime ụdị ya, site na efere na nri nri na -eji nri a, ma ọ bụ ị nwere ike rie ya site na mmanụ mkpụrụ ugu ma ọ bụ site na iwere ihe oriri na -eji mkpụrụ ugu dị ka ntọala.
Ndị a bụ isi nhọrọ atọ ị ga -eri mkpụrụ kwa ụbọchị wee nweta uru ọ na -eweta. Ndụmọdụ dị mkpa abụghị ịgabiga ya, mkpụrụ ole na ole n'ụbọchị ma ọ bụ ugboro ole na ole n'izu karịrị. Ọnụ ọgụgụ dị elu kwa ụbọchị nwere ike ime ka ị maa abụba, n'ihi na o nwere ọtụtụ kalori.
Mkpụrụ ugu ọ na -adị gịrịgịrị?
Mkpụrụ ugu bara ụba na protein, potassium na magnesium na ihe a niile na-enyere aka na mgbake na ike nke akwara, nke a na-akpọ oke abụba yana na mkpochasị abụba, oke abụba. Ọ bụrụ na -eri obere ego, ọ nwere ike inyere gị aka ifelata.
Nsogbu bụ na mkpụrụ ugu nwere nnukwu kalori, yabụ ọ bụrụ na ị rie oke, mmetụta a ga -abụ nke ọzọ, ị ga -ebu ibu kama ịbelata.
Ntụziaka kachasị mma maka iji mkpụrụ ugu gị bụ ịkwadebe salad dị iche iche nwere ọtụtụ ihe eji eme ya.
Letus America, letus uhie, arugula, tomato cherry, mango, mkpụrụ oliv ojii, ọka, karọt na mkpụrụ ugu iji gwụchaa. Ihe niile a jiri ntakịrị nnu, mmanụ na lemon tinye ya. Ọ na -atọ ụtọ, ọbụladị jikọtara ya na anụ mara mma.
A pụkwara ịzọpịa mkpụrụ ugu ma tinye ya na ihendori ma ọ bụ jiri ya mee ihe dị ka ihe na -esi isi mgbe a kwadebere nri. Ha bụkwa nnukwu nhọrọ maka gị iji ose a.
Ọ bụrụ na ị masịrị ndụmọdụ ndị a gbasara mkpụrụ ugu, kerịta ederede a na netwọkụ mmekọrịta gị!
Ngwaahịa maka ntutu ntutu: Chọpụta nke kachasị mma ma dịkwa ọnụ ala!
Mmanụ Rosehip: Mụta ihe niile banyere mmanụ a dị ike!